musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Basa reUnited States muUNWTO Itsva?
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • wedzero • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Spain Kuputsa Nhau • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Wtn
Zvakaoma kumakurukota ezvekushanya kuenda kuMadrid kupera kwemwedzi uno kugadzira nhoroondo yeUNWTO itsva. Inogona kunge yakaenzana mukana wakarasika weUNWTO nyika dziri nhengo kuratidza hutungamiriri uye kuve piyona wenguva yemberi uye UNWTO itsva, kana vakagara kumba kana kutumira mumiriri kuti aite basa regurukota rezvekushanya kuUNWTO General Assembly iri kuuya muMadrid Mbudzi. 28 - Zvita 3.
United States, Australia, neUnited Kingdom masimba makuru muWorld Tourism, asi asiri nhengo yeWorld Tourism Organisation (UNWTO).
Vamiriri, vanachipangamazano vanodhura, nedzimwe nyanzvi dzakabva kunyika idzi dzakanga dzapinzwa basa neUNWTO nemasangano akabatana nawo kuti vape mazano, tsvakurudzo, nemamwe mabasa, asi nyika dzavo dzisingabhadhare mari dzekuva nhengo.
Chimiro chitsva cheUNWTO chingadzose US nemamwe masimba epasi rose mukushanya mumubatanidzwa uyu wakabatana neUN senhengo dzinobhadhara?
IUS yaive nhengo yekutanga yeUNWTO. Kuti United States irambe iine pesvedzero huru mu World Tourism Sangano uye World Tourism zvachose, asi kusabhadhara mubhadharo wenhengo kwakonzera kuti UNWTO isanyanya kukosha, isina kugadzikana mune zvemari, uye kushomeka semutungamiri anoremekedzwa wechikamu cheruzhinji rwepasirese tourism world.
PaWorld Tourism Day 2016, iyo foVaimbova gurukota rezvekushanyirwa kwenyika muZimbabwe, Dr. Walter Mzembi, vakadaro eTurboNews: “Pazuva reWorld Tourism Day muna 2016, ndizere nemazano.”
Mzembi aida kuti nyika dzese dzemuUS dzipinde muUNWTO dzakazvimirira. Tichifunga nezvese nyika yakatozvimiririra zvakanyanya mukushambadzira kushanya mukati nekunze kweUS, pfungwa iyi yanga isingaite.
"Zvichida iyi ndiyo mhinduro kune guru guru rekushanya pasi rose, United States, kupinda zviri pamutemo United Nations World Tourism Organisation (UNWTO). Mhinduro inogona kunge iri nhengo itsva makumi mashanu kuUNWTO, nyika imwe panguva,” Mzembi akaudza eTurboNews.
Iyi nzira yekunze yakakurukurwa nemumiriri weUnited States, Harry K. Thomas, Jr., naDr. Walter Mzembi, avo vakanyanya kumirira Munyori Mukuru weUNWTO muna 2017 paakanga achirwisana neMunyori Mukuru wezvino Zurab Pololikashvili. .
UNWTO inoramba ichigovana data, kutsvagisa, uye zvimwe zvinhu neUS uye nyika zhinji dzisiri nhengo pasina mubhadharo. Izvi hazvo hazvigoneke.
Muna Chikumi 2019, runyerekupe rwakatanga nezve United States kujoina World Tourism Organisation. Izvi zvakakurumidza kurambwa naIsabell Hill, Director, National Travel and Tourism Office pa US Dhipatimendi Rekutengeserana, asi seri kwezvinoitika, mabasa airatidzika kuva anofambira mberi munhau iyi.
Izvi zvaive muna Gumiguru 2019, mwedzi mitanhatu COVID-6 isati yaparadza kushanya. Uku kwaive kupera kwehutongi hwaTrump muUnited States.
Chibvumirano cheParis Climate Agreement, chibvumirano chenyukireya cheIran, Trans-Pacific Partnership, UNESCO - izvi zvese zvibvumirano zvepasi rose kana zvibvumirano izvo United States yakabuda kubva kubva Mutungamiri Trump vakagadza hurongwa hwavo hwe "America First" pakutanga kwetemu yavo yekutanga.
Muna 2019, Mutevedzeri weMunyori weNyika Kevin E. Moley akaita musangano nevakuru veUNWTO muMadrid kuti vaenderere mberi nehurukuro dzekubatanidzwazve kweUS.
Muna Chikumi 2019, a Nhumwa dzeWhite House dzakapinda musangano weExecutive Council wesangano muBaku, Azabhaijani. Panguva imwecheteyo, chinangwa cheUS chekutauriranazve kuve nhengo chakaziviswa. "America Chekutanga hazvireve America chete," akadaro White House Mutevedzeri Mukuru weVashandi.
Muna Chikumi 2019, pakatanga kuziviswa tarisiro yekujoinha "matemu anobatsira kuUnited States", Dhipatimendi reNyika reUS rakaburitsa chirevo ichiti "Dhipatimendi rinotenda kuti UNWTO inopa mukana wakakura wekusimudzira kukura muchikamu ichocho, kugadzira. mabasa matsva evaAmerica, uye simbisa huwandu husingaenzaniswi uye mhando yenzvimbo dzekushanya dzeUS. "
UN panguva iyoyo yakafadzwa netarisiro yekuti US ichabatana zvakare. Mune chirevo chakabudiswa muna 2019, Munyori Mukuru weUNWTO, Zurab Pololikashvili akati, "Zvinokurudzira zvikuru kuti United States yakaratidza pachena chinangwa chayo chekubatana neUNWTO uye kutsigira kushanya semutyairi mukuru wekugadzira mabasa, kudyara, uye bhizinesi, uye kuchengetedza zvisikwa. uye nhaka yetsika pasi rose.”
Mamwe masimba ekushanya asiri nhengo dzeUNWTO anosanganisira UK, Canada, neAustralia. Kunyange hazvo nyika idzi dzakabva nezvikonzero zvakasiyana, kushaikwa kwetarisiro pamwe negwaro rekodzero dzevanhu vanogara mudare remakurukota ragara richishoropodzwa nesangano iri.
The World Tourism Sangano inoda aya masimba makuru ekushanya kuti ave nhengo. Izvi hazvisi zvemari yenhengo inodiwa nekukurumidza, asiwo kuchengetedza chero chimiro sesangano repasi rose rebazi rezvekushanya pasi rose.
Nekukanganisa kwakawanda mukati mehutungamiriri hwazvino muUNWTO, neCCIDID-19 ichisundidzira kushanya mumatambudziko ayo akakura, tarisiro yeUnited States yekujoinha inova kure - kana kwete?
Isabel Hills, asiri iye chete Director weNational Travel and Tourism Office, Dhipatimendi reCommerce, United States, asiwo Sachigaro we Sangano reMubatanidzwa wezvehupfumi nebudiriro (OECD) Tourism Committee, ine ruzivo rwakakwana kune zvinyorwa zvose zveUNWTO uye tsvakurudzo, kunyange zvazvo United States sevanhu vasiri nhengo, yanga isiri kubhadhara mari yehutano inodiwa nokukurumidza kuUNWTO kwemakore gumi apfuura.
OECD iforamu umo hurumende dzinoenzanisa nekutsinhana zviitiko zvemitemo, kuona maitiro akanaka maererano nematambudziko ari kubuda, uye kukurudzira sarudzo uye kurudziro kuti ibudise marongero ari nani ehupenyu huri nani.
Donzvo reOECD nderekusimudzira mitemo inovandudza hupfumi nemagariro evanhu pasi rose.
Mamiriro ezvinhu Nhasi
Nekushanya kudzidza kushanda neCCIDID, Saudi Arabia neSpain zvakatanga kufamba kutsva uye zvakatounza US mumusanganiswa uyu. Pasi pehutungamiriri hweSaudi, yekutanga-nyika dzakawanda, ine vatori venhau vakawanda Tourism Coalition paCOP26 muGlasgow kutanga kwemwedzi uno yakaumbwa.
Zvichida pane mukana wekuti chirongwa chitsva ichi chibatanidzwe muUNWTO itsva? Kana chirongwa ichi chaizobatanidzwa muUNWTO itsva pasi pehutungamiriri hutsva, pane mukana chaiwo wekuti vese vane masimba ekushanyirwa pasi rose vapinde musangano iri zvakare.
Chiratidzo chakadaro chekubatanidzwa chakatoitwa uye chakadzokororwa nenyika dzakavamba chirongwa chitsva ichi.
MuChikamu 1, nyika gumi dzakazara dzakakokwa kumubatanidzwa:
Ichi chiitiko chitsva chinosimbisa kukosha kweUNWTO General Assembly iri kuuya yekuisa sangano munzira itsva.
Mukana wemakurukota ekushanya enyika dziri nhengo dzeUNWTO kuti aende kuMadrid mukupera kwemwedzi uno uye kutora chikamu muGeneral Assembly uri kuomeswa zuva nezuva.
General Assembly inogona kuve musangano wevamiriri veMadrid kuti vabatsirwe nenyika shoma dziri nhengo. Izvi zvinogona kusaunza nhamba inodiwa yemavhoti anodiwa uye zvinogona kumanikidza imwe musangano pane imwe nguva inotevera.
Nekudaro, zvakakosha kuti nyika dzenhengo dzeUNWTO nemakurukota avo vanzwisise kukosha kwechiitiko ichi.
Sachigaro weATB Cuthbert Ncube & Hon. Secretary of Tourism Kenya Najib Balala
Cuthbert Ncube, Sachigaro we African Tourism Bhodhi, akaudzwa eTurboNews nhasi kubva pakushanya zviri pamutemo kuSenegal, "The African Tourism Board iri kukurudzira kuti Africa ibatane uye iuye pamwe chete muMadrid kumusangano mukuru weUNWTO."
Hezvino izvo zvaizoitika kana iyezvino Secretary General asina kusimbiswa paUNWTO General Assembly iri kuuya kuMadrid muna Zvita 3, 2021:
General Assembly yaisazotambira kurudziro yakaitwa neExecutive Council yechinzvimbo cheMunyori Mukuru weSangano.
Icharaira Executive Council kumusangano wayo wechi115 uchaitirwa muMadrid, Spain, Zvita 3, 2021, kuvhura nzira nyowani yekusarudzwa kweMunyori Mukuru wesangano.
Iyo inorayira Executive Council kuti maitiro akadaro esarudzo ane nguva shoma yemwedzi ye3 uye inokwana mwedzi mitanhatu, kutanga kubva pazuva rekuvhurwa kwesarudzo.
Icharaira Mutungamiriri weDare Repamusoro uye Munyori Mukuru wesangano kuti vashevedze nhengo zana negumi nenhanhatu dzeKanzuru uye neMusangano Mukuru unoshamisa muna Chivabvu 116 panzvimbo uye zuva richatsanangurwa.
Kana iyezvino Secretary-General akasazosimbiswa paGeneral Assembly iri kuuya, anogona kuwana mumwe mukana wekupinda mumakwikwi matsva echinzvimbo ichi.
Nekumwe kutaura, sarudzo itsva uye dzakachena dzichauya apo vatsva vachabvumidzwa kukwikwidza uye kurwira chinzvimbo.
Vazhinji vanoti, izvi handizvo zvakaitika muna Ndira 2021, apo Executive Council yakasarudzazve Zurab Pololikashvili.
Vazhinji vanotenda kuti iyi inogona kunge iri nzira yakanakisa yekumberi kune ramangwana reUNWTO neWorld Tourism. Ndiyo zvakare nzira yakanakisa yevanogona kuve nhengo nyowani, dzakaita seUnited States uye kune gumi nyika ichangopinda muchirongwa chepasi rose chinotungamirwa neSaudi Arabia neSpain kuti ive simba rekufambisa remangwana idzva uye riri nani reWorld Tourism Organisation.
Inogona kutoisa nhaka yakanaka kune iyezvino UNWTO Secretary General.
UNWTO Ministers (Nhume) vari kuronga kuenda kuGeneral Assembly muMadrid Mbudzi 28 - Zvita 3 vanogona kuita nhoroondo yekushanya kwenyika.
Kusaenda kuGeneral Assembly kungareva mukana wakarasika wenyika yakadai yakashaikwa pachiitiko chakakosha ichi.
Vachashaikwa kuGeneral Assembly vari eTurboNews vatori venhau. Muna February 2018, eTurboNews nekudada akataura kugadzwa kwaMarcelo Risi seMukuru Media Officer weUNWTO.
Marcelo akadaro eTurboNews muna Kukadzi 2018 paakabvunzwa kuti sei mhinduro kubva kuUNWTO dzisisiri dzenguva dzose uye dzakaoma, mhinduro yaive: "Pane mutemo mutsva wekuita uye kubvumidzwa."
Iye zvino Marcelo Risi mumwe chete akarairwa kuti anyore eTurboNews kubva kune yazvino UNWTO, kumanikidza eTurboNews kuita dzimwe gadziriro dzekuvhara nemazvo iyi yakakosha Musangano Mukuru.